Nhau - Unoziva here iko kwekushisa tembiricha yegirazi inki?
1.Kupisa tembiricha girazi inki, inonzi zvakare yakanyanya tembiricha yakadzikama girazi inki, sintering tembiricha iri 720-850 ℃, mushure mekushisa kwakanyanya kupisa, inki negirazi zvakasunganidzwa zvakabatana. Inoshandiswa zvakanyanya mukuvaka machira emadziro, girazi remotokari, girazi remagetsi, nezvimwe.
2.Girazi rakapfava inki: Inopfavisa girazi inki inzira inosimbisa ye680 ℃ -720 ℃ yakanyanya tembiricha yekukasira kubheka uye kutonhora kwechinguva, kuitira kuti girazi pigment uye iro girazi muviri wanyungudika kuita muviri mumwe, uye kunamatira nekusimba kweruvara. zvinoonekwa. Mushure mokunge ruvara rwakavandudzwa uye rwasimbiswa Girazi rakapfuma muvara, chimiro chegirazi chakasimba, chakasimba, chakachengeteka, uye chine mwero wekurwisa kuora kwemhepo, uye ine yakanaka ngura kuramba uye kuviga simba.
3. Girazi yekubheka inki: yakanyanya tembiricha kubheka, sintering tembiricha ingangoita 500 ℃. Inoshandiswa zvakanyanya mugirazi, keramiki, michina yemitambo uye mamwe maindasitiri.
4. Yakadzika tembiricha girazi inki: Mushure mekubheka pa100-150 ℃ kwemaminetsi gumi nemashanu, iyo inki ine adhesion yakanaka uye yakasimba solvent kuramba.
5.Girazi regirazi ingi: kuomeswa kwechisikigo, kuomeswa kwepasi nguva ingangoita maminetsi makumi matatu, chaizvo anenge maawa gumi nemasere. Inokodzera kudhinda pane ese marudzi egirazi uye polyester inonamira mapepa.